ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၆) ရက်မြောက်နေ့ (၆. ၆. ၂၀၁၉) | Pyithu Hluttaw
(င)-ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်၊ ကျွဲသေကျေးရွာအုပ်စု၌ ကျွဲသေကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ အသစ် ဖွင်‌့လှစ်ခွင်‌့ပြုပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
(စ)-လစာခံစားခွင့်မရှိသေးသော ဝန်ထမ်းသစ်ဆရာဝန်များအားလုံးကို ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် တက်စေ ခြင်းအစား အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး တာဝန်ယူမည့် သူများကိုသာ တက်ရောက်စေရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဆ)-ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချို(၂)ရပ်ကွက်ရှိ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဇနီးဒေါ်ခင်ကြည် အမျိုးသမီးဆေးရုံအား ခုတင်(၁၀၀)ဆံ့အမျိုးသမီးဆေးရုံအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဇ)-ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိ ၂၅ ခုတင်ဆံ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကို ခုတင် ၅၀ ဆံ့ စံကိုက်ဖွဲ့စည်းပုံသို့ တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဈ) သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်များအား ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲရာတွင်လည်းကောင်း၊ ဖော်ပြရေးသားရာတွင် လည်းကောင်း သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန် စကားရပ်အစား သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာဆရာဝန် စကားရပ်ကိုအစားထိုးသုံးစွဲပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
(ည)-မန္တလေးမြို့ GMP တိုင်းရင်းဆေးဝါးစက်ရုံ အဆောက်အဦနှင့် တပ်ဆင်ထားသော စက်ပစ္စည်းများသည် GMP စံသတ်မှတ်ချက် အရည်အသွေးများ ပြည့်မီမှုရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၆) ရက်မြောက်နေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်